Siiradii Saxaabada rasuulka SWC
Bahda SomaliTalk waxa ay akhristayaasha qiimaha badan halkan ugu soo gudbinayaan casharro ku saabsan siiradii ama habnololeedkii saxaabadii Rasuulka (scw).
16- ABUU AYYUUB AL-ANSAARI
"Waxaa lagu aasay derbiga weyn hoostiisa ee ku yaala magaallada Qusdandiiniya"
Saxaabigan sharafta badan ee aan sheekadiisa qaadanayno magaciisa waxaa la yiraahdaa Khaalid Binu Zeyd Binu Kuleyb, wuxuu ka dhashay qabiilka reer Banii Najjaar. Kunyadiisu (carabta qofka ay sharfayso ayaa waxay ugu yeeri jirtay magaca wiilkiisa curadka ah, waana dhaqan carbeed) waa Abuu Ayuub Al-Ansaari oo ah Ayuub aabihiis, waxaana loogu abtiriyaa Ansaarta.
Haddaynu nahay bahweynta muslimiinta, waa kuma qofka aanan aqoonin saxaabiga Abuu Ayuub Al-Ansaari?!. Wuxuu Eebbe (sw) magaciisa ku koryeelay dunida bariga iyo galbeedkiisa, wuxuu Ilaah dadka ka sareysiiyay kolkii uu gurigiisa ka doortay guryaha muslimiinta si uu u dego Nebigii (scw) sharafta badnaa, kadib markii uu yimid magaallada Madiina isagoo muhaajir ah, dhab ahaantiina taas ayaa Abuu Ayuub Al-Ansaari ugu filan sharaf iyo wanaag.
Degitaanka uu Nebiga (scw) soo degay guriga Abuu Ayuub Al-Ansaari ayaa waxaa ku jirta sheeko aan laga xiiso dhigaynin soo noq-noqashadeeda. Sababtuna waa iyadoo markii uu Nebiga (scw) yimid magaallada Madiina, ayaa waxaa Nebiga (scw) soo dhoweeyay dadkii degganaa Madiina dhoweyn iyo maamuusid tii ugu sharfta badanayd. Waxay Rasuulka (scw) ku eegeen indho kalgacalo iyo naxariis, iyadoo ay ku faraxsan yihiin imaanshaha Rasuulka. Sidoo kale waxay u fureen laabtooda si kash iyo laab ah, iyagoo albaabaha guryahoodiina ay ballaqeen oo ay u fureen Rasuulka (scw) si uu Xabiibka (scw) ugu dego isagoo la sharfay.
Rasuulka (scw) wuxuu ku hakaday xaafadda la yiraahdo Qubaa oo ku tiillay hareeraha magaallada Madiina, wuxuuna halkaa ku negaaday 4 maalmood, isagoo dhisayna Masjidkii ugu horeeyay ee lagu dhiso Islaamka.
Hase ahaatee, Rasuulka (scw) wuxuu ku hakaday xaafadda la yiraahdo Qubaa oo ku tiillay hareeraha magaallada Madiina, wuxuuna halkaa ku negaaday 4 maalmood, isagoo dhisayna Masjidkii ugu horeeyay ee lagu dhiso Islaamka. Intaa dabadeed, wuxuu Rasuulka baxay isagoo saaran hashiisa, waxaa waddadii magaallada Madiina istaagay madaxdii iyo odayadii magaallada Madiina, iyagoo mid kasta uu doonayo inuu ku guuleysto sharafta degista Rasuulka (scw) uu ku degayo gurigiisa. Odayadaa waxay midba midka kale uu u hormari jiray hasha, waxayna Rasuulka (scw) ku oranayeen markaas: �Rasuulka Alloow annaga agtayada soo dega, waxaana na weheliya tiro dad ah, hub iyo dagaalyahanno kaa difaaca qofkii xumaan kula maaga�. Rasuulka (scw) ayaa wuxuu dadkii ku oranayay: � hashan faraha ka qaada, maxaa yeelay waxay ku socotaa amar xagga Rabbi (sw) kaga yimid�.
Waxay ahayd hashu tii iska socota, iyadoo weliba ay raacayso indhaha dadka. Haddey hashu gudubto guri waxaa murugoonayay dadkii degganaa gurigaas oo waxaa ku dhacayay quus, halka farxad iyo yiddiddiilo weyn ay gelinaysay kuwa iyaga aynan weli hasha gudbin guryahooda. Waxay socoto hashii, dadkiina ay daba guurayaan oo ay daba socdaan iyagoo kalgacalo la huraya ogaanta ninka nasiibka badan ee ay gurigiisa ag fariisan doonto hasha, ayaa waxay markii danbe hashii soo gaartay meel bannaan oo ku aaddan guriga Abuu Ayuub Al-Ansaari, halkaas ayeey hashiina fariisatay. Hase yeeshee Rasuulka (scw) weli kama uusan degin hasha. Wax yar maba aynan sii fadhinin hashii, jeer ay haddana boodday oo istaagtay oo socotay, Rasuulkana (scw) uu u raariciyay hoggaankeeda. Haddana, waxyar kadib hashii way soo laabatay oo waxay fariisatay meeshii ay hore u fariisatay. Markay arrintu halkaas mareyso, ayaa waxaa farxad weyn buuxisay laabtii Abuu Ayuub Al-Ansaari, wuxuuna u deg degay xagga Rasuulka (scw) isagoo soo dhoweynaya. Alaabtii Rasuulka (scw) ayuu qaaday isagoo uu horsocdo Rasuulka, isagoo la moodo inuu sido waxa keyd hanti ah ee dunida yaala oo dhan.
Abuu Ayuub Al-Ansaari Ilaah ha ka raalli noqdee wuxuu yimid gurigiisa, iyadoo uu la socdo Rasuulka (scw)
Abuu Ayuub Al-Ansaari Ilaah ha ka raalli noqdee wuxuu yimid gurigiisa, iyadoo uu la socdo Rasuulka (scw).
Guriga Abuu Ayuub wuxuu ka koobnaa labo dabaqadood, mid hoose iyo mid sare. Dabaqii sare ayaa wuxuu ka soo faaruqiyay alaabihii ku jiray, si uu u dejiyo Rasuulka (scw) iyo reerkiisa. Hase ahaatee, Rasuulka (scw) wuxuu jeclaystay inuu dego dabaqa hoose ee guriga, Abuu Ayuub-na wuxuu u hoggaansamay rabitaankii Rasuulka (scw) oo wuxuu dejiyay meeshii uu jeclaystay. Habeenkii markii la gaaray, Rasuulka (scw) uuna seexday, Abuu Ayuub iyo afadiisana ay koreen dabaqii sare ee guriga ayna albaabkooda soo xirteen ayaa Abuu Ayuub soo jaleecay afadiisa isagoo ku leh: �inkaar qabto maxaynu sameynay?! Ma Rasuulka (scw) ayaa noqonaya kii naga hooseeya, innaguna aynu noqono kuwo ka sarreeya?! Ma waxaynu dul soconaynaa Rasuulka (scw) dushiisa?! Ma waxaynu u dhaxeynaynaa waxyiga iyo Nebiga (scw)?! Haddeynu sidaas sameyno waynu halaagsamaynaa�. Abuu Ayuub iyo xaaskiisa way qoomameeyeen, iyagoo aynan garanaynin waxa ay sameyn doonaan.
Naftoodii waxa ay xoogaa yar ku xasishay kolkii ay u bateen koonaha qolka ay ku jireen, kaasoo aanan ku beegnayn Rasuulka (scw) dushiisa
Naftoodii waxa ay xoogaa yar ku xasishay kolkii ay u bateen koonaha qolka ay ku jireen, kaasoo aanan ku beegnayn Rasuulka (scw) dushiisa. Meeshii ayeey isaga jireen iyagoo iska ilaalinaya markasta inay socdaan meesha dhexda ah.
Subixii markii la gaaray wuxuu Abuu Ayuub ku yiri Rasuulka (scw): �labo indhood isuma aynan geynin xaleey anniga iyo Ummu Ayuub-ba�. Rasuulka (scw) ayaa weydiiyay sababta ay arrintaas ku timid, wuxuuna Abuu Ayuub ugu jawaabay: �waxaan soo xasuustay inaan saaranahay qol aad adiga naga hoosaysid, waxaan kaloo xasuustay haddii aan dhaqdhaqaaqo in boorku kugu soo daadanayo, oo aan markaas ku dhibo, dhinaca kale waxaan kala dhex galay adiga iyo waxyiga�. Rasuulka (scw) ayaa yiri: �naftaada u tur Abuu Ayuubow, innaga waxaa noo sahlan xagga hoose, dadka badan ee na soo booqanaya awgood�.
Abuu Ayuub wuxuu yiri, waxaan u hoggaansamay amarkii Rasuulka (scw) jeer laga soo gaaro habeen qaboow. Waxaa jabtay ashuun aynu lahayn, dabadeedna biyihii ku jiray ayaa qolkii sare ku daatay. Anniga iyo xaaskayga waxaan u istaagnay sidii aan u qallajin lahayn biyaha,
mana aanan haysan habeenkaas wax aan ka ahayn katiifad yar oo noo ahayd buste oo kale.
mana aanan haysan habeenkaas wax aan ka ahayn katiifad yar oo noo ahayd buste oo kale. Katiifaddii yareyd ayaa waxaan bilownay inaan biyihii ku qallajino, si biyihii aynan u gaarin Rasuulka (scw), sidaasna ayeynaan habeenkaana u seexan. Abuu Ayuub wuxuu yiri, markii uu waagii baryay ayaa waxaan ku soo kallahay Rasuulka (scw), waxaana ku iri, Aabahay iyo hooyaday lagugu furaye Rasuulkii Allow waan dhibsaday inaan saarnaado dabaqa sare, adiguna aad degganaato xagga hoose, intaa dabadeed waxaan uga sheekeeyay sheekadii ashuunkii jabay xaleey, Rasuulka (scw) wuu iga aqbalay codsigaygii wuxuuna u soo guuray dabaqii sare, anniga iyo Ummu Ayuub-na waxaan u soo guurnay dabaqii hoose.
Rasuulka (scw) wuxuu degganaa gurigii Abuu Ayuub Al-Ansaari muddo ku dhow toddobo billood, jeer laga dhammeystiro masjidkii Nebiga, meeshaasoo ay ahayd meeshii markii hore ay fariisatay hasha. Qolalkii masjidka uu lahaa ayuu Rasuulka (scw) u guuray isaga iyo xaasaskiisaba. Abuu Ayuub iyo xaaskiisuba waxay jaar la noqdeen Rasuulka (scw). Labo deris noqdo ku wanaag badanaa Abuu Ayuub iyo Rasuulka (scw). Abuu Ayuub Al-Ansaari Ilaah ha ka raalli noqdee wuxuu Rasuulka (scw) jeclaaday jaceyl hantay qalbigiisa iyo dhuuxiisaba, dhinaca kale Rasuulka (scw) ayaa isna jeclaaday Abuu Ayuub, wuxuuna marka uu guriga Abuu Ayuub yimaado uu Rasuulka (scw) u dhaqmi jiray sida gurigiisa oo kale.
Cabdullaahi Binu Cabbaas ayaa sheekeeyay isagoo leh: waxaa goor duhur ah masjidka soo aaday Abuu Bakar Assiddiiq Ilaah ha ka raalli noqdee, waxaa arkay Cumar Binu Khadaab, wuxuuna ku yiri "Abuubakarow saacaddan maxaa ku soo bixiyay?!".
gaajo daran oo i haysa waxaan ka ahayn ima soo saarin. Cumar ayaa misna yiri, annigana Ilaah ayaan ku dhaartaye gaajo daran waxaan ka ahayn ima soo saarin
Abuubakar ayaa yiri, gaajo daran oo i haysa waxaan ka ahayn ima soo saarin. Cumar ayaa misna yiri, annigana Ilaah ayaan ku dhaartaye gaajo daran waxaan ka ahayn ima soo saarin. Goor ay Abuubakar iyo Cumar ay isla taagan yihiin ayaa waxaa ku soo baxay Rasuulka (scw) wuxuuna weydiiyay waxa soo saaray saacaddan iyada ah, waxayna yiraahdeen: �wallaahi ayaan ku dhaaranaye, nama soo bixin aan ka ahayn gaajo daran oo na haysa awgeed� Nebiga (scw) ayaa wuxuu yiri �annigana -waxaan ku dhaaranayaa Allaha ay naftayda labadiisa gacmood ay ku jirto� inaynan i soo saarin waxaan gaajadaas ahayn, ee i soo raaca�.
Marti gelintii iyo maamuuskii Abuu Ayuub ee Rasuulka (scw), Abuubakar iyo Cumar-ba:
Rasuulka (scw) oo ay weheliyaan Abuubakar iyo Cumar ayaa waxay yimaadeen albaabkii guriga Abuu Ayuub Al-Ansaari, wuxuuna Abuu Ayuub maalin kasta Rasuulka ugu talo geli jiray cunto, haddii uu soo daaho Rasuulka oo uusan cuntadii u iman, wuxuu cuntadii Abuu Ayuub siin jiray reerkiisa. Markay soo gaareen albaabkii Abuu Ayuub ayaa waxaa iridka ka furtay xaaskii Abuu Ayuub, iyadoo leh �Nebigii Ilaah iyo inta la socotaba ha soo dhowaadeen�. Rasuulka (scw) wuxuu Ummu Ayuub weydiiyay inuu joogo Abuu Ayuub, durbadiiba codkii Nebiga waxaa maqlay Abuu Ayuub oo waqtigaas ka shaqeynayay beer timireed uu lahaa, kuna tiillay meel gurigiisa u dhow. Isla markiiba intuu soo qaabilay Rasuulka (scw) isagoo leh: �Rasuulka Alle iyo inta la socotaba ha soo dhowaadeen� Wuxuuna intaa raaciyay �Nebigii Alloow waqtigan ma ahan waqtigii aad iman jirtay�. Rasuulka (scw) wuxuu yiri �waa runtaa�,
Abuu Ayuub wuxuu u kacay beertiisa isagoo soo gooyay rucub timir ah oo weliba bislaatay
dabadeedna Abuu Ayuub wuxuu u kacay beertiisa isagoo soo gooyay rucub timir ah oo weliba bislaatay. Nebiga (scw) ayaa ku yiri, ma aanan jeclayn inaad laantoo dhami goyso, maad noo soo gurtid oo kaliya timirta. Abuu Ayuub wuxuu yiri, Rasuulkii Allow waxaan jeclaystay inaad rucubta ka goysatid timirtiisa, hoobaantiisa iyo yacyacoodkiisaba, intaasoo kaliya maahee, waxna waan idiin gowracayaa. Rasuulka (scw) wuxuu yiri:
Rasuulka (scw) wuxuu yiri: �haddaad neef gowracaysid ha gowracin neef irmaan�.
"haddaad neef gowracaysid ha gowracin neef irmaan".
Wuxuu Abuu Ayuub soo saaray neef orgi ah, wuuna gowracay, wuxuuna xaaskiisa ku yiri, intaad cajiinta qastid waxaad noo karisaa kibis muufo ah, adigaana ku fiican dubista muufada. Abuu Ayuub wuxuu qaaday jeex ka mid ah neefkii orgiga agaa, markaasuu kariyay, jeexii soo harayna wuu soley. Raashinkii markii uu bislaaday, lana soo hordhigay Rasuulka (scw) hortiisa isaga iyo labadiisa saaxiib (Abuubakar iyo Cumar), ayaa wuxuu Rasuulka (scw) qaaday cad ka mid ah hilibkii, ka dibna wuxuu cadkii geliyay kibistii ama muufadii dabadeedna wuxuu Abuu Ayuub ku yiri, intan waxaad ula deg degtaa gabadhii yareyd ee aan dhalay ahaydna Fadumo, maxaa yeelay ma aynan dhadhamin/cunin cadkan oo kale muddo hadda dhowr maalmood laga joogo.
Rasuulka (scw) wuxuu yiri): �Allaha naftayda ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye waxaan (nimcadan) waa nimcada xaggiisa la idinka weydiinayo maalinta qiyaamada, ee haddaad heshaan nimcadan oo kale oo aad gacmaha la gashaan waxaad tiraahdaan Bismillaahi (magaca Alle ayaan ku billaabay), markaad dheregtaana waxaad tiraahdaan Al-xamdulillaah (mahad oo idil Alle ayeey u sugnaatay) Allihii na dhargiyay ee nimcadiisa nagu galladaystay,
Rasuulka (scw), Abuubakar iyo Cumar markii ay cuneen raashinkii ayna dhargeen, ayaa wuxuu Nebiga (scw) yiri: �muufo, hilib, timir, yacyacood iyo hoobaan!!� ilmo ayaa ka soo daadatay, kadibna wuxuu yiri: �Allaha naftayda ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye waxaan (nimcadan) waa nimcada xaggiisa la idinka weydiinayo maalinta qiyaamada, ee haddaad heshaan nimcadan oo kale oo aad gacmaha la gashaan waxaad tiraahdaan Bismillaahi (magaca Alle ayaan ku billaabay), markaad dheregtaana waxaad tiraahdaan Al-xamdulillaah (mahad oo idil Alle ayeey u sugnaatay) Allihii na dhargiyay ee nimcadiisa nagu galladaystay, intaa kadib Rasuulka (scw) wuu kacay, wuxuuna Abuu Ayuub Al-Ansaari ku yiri noo kaalay berito. Waxaa Rasuulka (scw) dabeecad u ahayd oo uu jeclaa in qofkii ixsaan u fala inuu wanaag ugu abaalgudo. Abuu Ayuub ma uusan maqlin hadalkii Rasuulka (csw), hase ahaatee Cumar Binu Khadaab ayaa ku yiri: �Abuu Ayuubow wuxuu Rasuulka (scw) ku farayaa inaad u timaadid berito�. Abuu Ayuub Al-Ansaari ayaa Rasuulka (scw) ku yiri: �maqlay oo aqbalay Rasuulkii Allow�.
Rasuulka (scw) oo Abuu Ayuub guddoonsiiyay abaal gud:
Maalintii danbe markii la gaaray, wuxuu Abuu Ayuub Al-Ansaari aaday gurigii Rasuulka (scw), wuxuuna Rasuulka (scw) abaalgud ahaan Abuu Ayuub u siiyay gabar yar oo Rasuulka shaqaale u ahayd, wuxuuna kula dardaarmay inuu u wanaag falo, wuxuuna ku yiri: �Abuu Ayuubow gabadhan wanaag kula dhaqan, maxaa yeelay intii ay nala joogtay kuma aanan arag wax aan kheyr ahayn�. Abuu Ayuub wuxuu u laabtay gurigiisa, isagoo ay la socotana gabadhii shaqaalaha ahayd, kolkii ay aragtay afadii Abuu Ayuub Al-Ansaari waxay Abuu Ayuub weydiisay: �gabadhan yey shaqaale u tahay?!�. Abuu Ayuub wuxuu yiri annaga ayeey noo khidmaynaysaa.., waxaana na siiyay Rasuulka (scw). Ummu Ayuub oo ahayd afadii Abuu Ayuub ayaa iyadoo faraxsan waxay tiri: �ku sharaf badanaa mid wax bixiya (waa Nebiga (scw), ku sharaf badanaa wax la isa siiyo (waa gabadha)�. Abuu Ayuub wuxuu xaaskiisii ku yiri, laakiin wuxuu Rasuulka (scw) inoo dardaarmay inaan wanaag kula dhaqano. Ummu Ayuub ayaa tiri, sideen gabadha ugu ixsaan fali karnaa si aan ka fulino dardaarankii Rasuulka (scw)?.
Wuxuu Abuu Ayuub yiri, wallaahi ayaan ku dhaartaye ma arko wax uga kheyr badan fulinta dardaarankii Rasuulka (scw) aan ka ahayn inaan gabadha xoreyno.
Wuxuu Abuu Ayuub yiri, wallaahi ayaan ku dhaartaye ma arko wax uga kheyr badan fulinta dardaarankii Rasuulka (scw) aan ka ahayn inaan gabadha xoreyno. Ummu Ayuub ayaa tiri: �waxaa lagu waafajiyay sidii toosnayd, waxaadna tahay mid xaqa la waafajiyay�, sidiina ayuu Ayuub gabadha ku xoreeyay.
Weligii kama uusan harin duulimaadyada jihaadka:
Waxaan soo qaadanay qaybtii nabadeed ee nolosha Abuu Ayuub Al-Ansaari, haddii aad xoogaa yar milicsatid inaad is-dul-istaagtid qaar ka mid ah noloshii Abuu Ayuub ee dhinaca dagaalka waxaa hubaal ah inaad arkaysid wax lala yaabo. Abuu Ayuub Al-Ansaari noloshiisa oo dhan wuxuu ku jiray duulimaad dagaal, jeer lagaba yiraahdo: �weligii kama uusan harin duulimaad ay muslimiinta qaadeen laga soo billaabo xilligii Rasuulka (scw) uu noolaa ilaa laga gaaro xilligii Mucaawiya, illaa inuu duulimaad kale kaga mashquulo mooyaane�. Duulimaadyadiisii ugu danbeeye waxay ahayd kolkii uu Mucaawiye diyaariyay ciidankii uu hoggaaminayay wiilkiisii la oran jiray Yaziid, si loo furto magaallada Qisdandiiniya (waa magaallada hadda la yiraahdo Istanbuul), waqtigaas iyada ahna Abuu Ayuub wuxuu ahaa oday waayeel ah oo da�diisu ay wax yar u jirto siddeetan jir (80), sidaas oo ay tahay waayeelnimadkiisa kama uusan reebin inuu ku biiro ciidanka uu hoggaaminayay Yaziid, iyo inuu dhex jeexo hirarka badda isagoo Alle dartii u duulaya.
Hase ahaatee wax yar kadib maba uusan u sii dhaqaaqin dhinacii cadoowga jeer uu ka xanuunsado Abuu Ayuub Al-Ansaari bukaankii uu la dhiman lahaa, waxaana isagoo booqanaya u yimid Yaziid oo ahaa hoggaamiyihii dagaalka, wuxuuna ku yiri: �ma jiraan wax aad u baahan tahay oo aynu kuu fulino?�. Abuu Ayuub ayaa yiri, marka hore waxaad igu salaantaa ciidamada muslimiinta, waxaadna ku tiraahdaa: �Abuu Ayuub wuxuu idiin dardaarmayaa inaad gudaha u sii gashaan cadoowga dhulkiisa jeer aad ka gaartaan yoolka aad tiigsanaysaan meesha ugu fog, sidoo kale wuxuu Abuu Ayuub idiin dardaarmayaa inaad xanbaartaan oo uu idin raaco iyo inaad ku aastaan gommodyadiina hoostooda oo ah deyrka ama derbiga meesha la yiraahdo Qusdandiiniya, neeftii ugu danbeysayna ayaa ka soo baxday.
Ciidamadii muslimiinta waxay yeeleen wixii uu jeclaa saaxiibkii Rasuulka (scw), waxay dagaalamaan oo ay ciidankii hadba rogaal celiyaan ilaa ay markii danbe ka gaareen magaalladii Qusdhandhiiniya deyrkeedii, weliba iyagoo sida oo wada Allaha ka raalli noqdee Abuu Ayuub Al-Ansaari, halkaas ayeeyna u qodeen qabri, dabadeedna ku aaseen qabriga.
In la furanayo magaallooyinka Qusdandiiniya iyo Roma waxaa sii sheegay Nebiga (scw), furashada magaallada Qusdandiiniya waa la arkay oo waxaaba furay halyeeygii geesiga ahaa ee Muxammad Al-Faatix Allaha u naxariistee.
In la furanayo magaallooyinka Qusdandiiniya iyo Roma waxaa sii sheegay Nebiga (scw), furashada magaallada Qusdandiiniya waa la arkay oo waxaaba furay halyeeygii geesiga ahaa ee Muxammad Al-Faatix Allaha u naxariistee, waxa haray waa furashada Roma, iyadana waa tii la furto idinka Alle.
Ilaah ha u naxariisto Abuu Ayuub Al-Ansaari, maxaa yeelay wuxuu diiday illaa inuu ku dhinto fardaha dheereeya ee qiimaha badan dushooda isagoo u duulaya jidka Alle, waxayna maalintaas da�diisa ku dhoweyd 80 sanno.